Nepal Samaya | गहुँ निर्यातमा रोक लगायो भारतले, नेपाललाई पनि असर पर्ने
गहुँ निर्यातमा रोक लगायो भारतले, नेपाललाई पनि असर पर्ने
काठमाडौं– भारतले गहुँ निर्यातमा अस्थायी रोक लगाएको छ। भारतको यो निर्णयसँगै अब नेपालमा भारतबाट गहुँ नआउने भएको छ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारतमा गहुँ लगायतका खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएपछि भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै गहुँ निर्यातमा अस्थायी रोक लगाएको जनाएको हो।
भारतको यो निर्णयले नेपाललगायत थुप्रै देशलाई असर गर्ने जनाइएको छ। भारत विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक राष्ट्र हो।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को पहिलो नौ महिनामा भारतबाट नेपालमा ५ अर्ब ९७ करोड २२ लाख २५ हजार रुपैयाँको गहुँ भित्रिएको छ। उक्त मूल्यमा भारतबाट नेपालमा १८ करोड ९ लाख २० हजार ५६४ केजी गहुँ आएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नेपालले ११ अर्ब ९७ करोड ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँको गहुँ भारतबाट आयात गरेको थियो। सो मूल्यमा ३८ करोड ८२ लाख ७८ हजार ८७७ केजी गहुँ नेपाल भित्रिएको थियो। नेपालमा भित्रने सबैजसो गहुँ भारतबाट आउने गरेको थियो। भारतले रोक लगाएपछि गहुँको अभाव हुने देखिएको छ।
प्रकाशित: May 14, 2022 | 11:36:01 काठमाडौं, शनिबार, वैशाख ३१, २०७९
किन अकासियो वस्तुको मूल्य? सम्भव छ नियन्त्रण?
भारतसँग नेपालको खुला सिमाना भएकोले चोरीपैठारीका सामान धेरै आउने हुँदा त्यसले मूल्यमा असर गर्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ। यो रोक्नका लागि सरकारले कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ४०० ले घटेर ९७ हजार ८०० तोकिएको छ। अघिल्लो दिन उक्त सुन प्रतितोला ९८ हजार २०० मा कारोबार भएको थियो।
पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीलाई एनसेलले दियो छात्रवृत्ति
एनसेलले पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गरेको छ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका ग्राहकलाई सहारा फिजियोथेरापी अस्पताल महाराजगन्जले विशेष छुट दिने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरीजस्तो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरीजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्।